Qingdao TianHua inopa mamwe emhando huru uye akaumbwa esimbi machira. Isu tine ruzivo rwakakura rwezvese zvega rinorema simbi kugadzirwa uye nekubudirira kuburitsa zvisingaverengeki zvakaoma uye zvimiro zvakakura seVFD kabati, hombe duct furemu, kuchengetwa kwakawanda, kubata kwezvinhu, zvinorema zvimiro, matangi, hoppers, uye chute yemaindasitiri anosanganisira zvinoshandiswa. , migodhi, mafuta & gasi, maindasitiri, mamwe magetsi uye solar.
Qingdao TianHua vane ISO 9001 & ISO 3834-2 vane zvitupa, uye vanogadzira welding vanodzidziswa uye EN ISO 9606-1 vane zvitupa. Nezvese ruzivo rwakakura uye ruzivo mukugadzira inorema simbi, SVEIFAB inogona kukupa iwe chaizvo izvo zvauri kutsvaga. Sezvo tashanda muhuwandu hwakawanda hwemaindasitiri akasiyana, tinotenda kuti kugona kwedu kwesimbi inorema ndiko kwakanakisa kupihwa.
Kucheka--Kucheka Laser & Kucheka Moto
Zvakanakira laser yekucheka pamusoro pemechani yekucheka zvinosanganisira nyore kubata uye kuderedzwa kusvibiswa kweworkpiece. Precision inogona kunge iri nani, sezvo laser beam isingapfeki panguva yekuita. Kune zvakare mukana wakadzikiswa wekugadzirisa zvinhu zviri kutemwa, sezvo laser masisitimu ane diki-anokanganisa kupisa-nzvimbo.
Kucheka kwemoto kunogona kucheka kubva pashizha resimbi ukobvu kusvika ku100 inch zvinhu. Maitiro ehukobvu hwese akafanana uye ndizvo zvinhu zvinofanirwa kuve "preheated" kune tembiricha ye1,600-1,800 F madhigirii, ipapo iyo Oxygen yakachena inoburitswa munzvimbo inopisa uye simbi inozove oxidized kana kupiswa, saka izwi iri. "kupisa". Hunhu hwekuchekwa kwekupedzisira hunogona kunyatsonaka nehupamhi hwepamusoro, square/flat cut surface, uye inopinza slag-isina kumucheto.
Qingdao TianHua vane seti imwe chete yeCNC yekupeta michina kubva kuDERATECH iyo inonyanya kubhenda simbi inorema, yakanyanya kukotama Kureba i6m uye max ukobvu hunogona kukoneswa i20mm simbi ndiro.
Qingdao TianHua vane ISO 9001 & ISO 3834-2 vane zvitupa, uye vanogadzira welding vanodzidziswa uye EN ISO 9606-1 vane zvitupa. Heavy duty kugadzirwa kunoda kushandisa iyo chaiyo mhando yewelding kuti ive nechokwadi chekuvimbika kwechimiro. MIG, TIG, Oxy-Acetylene, light-gauge arc welding, uye mamwe akawanda mafomati ewelding anowanikwa kuti arumbidze iwo chaiwo marudzi emasimbi uye ukobvu hwauchazoda kugadzira michina yaunoda. Welding yakashandura masisitimu ezvivakwa zvakawanda nekupa hwaro hwakasimba kupfuura kuvaka rivet. Kwete chete welded simbi yakachengeteka, zvakare inodhura inoshanda.
Kusangana nezvinodiwa zveyakagadzirwa-yepamusoro nharaunda, yedu yakasimbiswa maindasitiri coating line zvese zvakagadziridzwa nguva pfupi yadarika. Qingdao TianHua inokwanisa kuisa chero inodikanwa coating mune imwe yeanodziya machira ekuisa zvivakwa uye shandisa nemaitiro e pretreatment isati yapfeka. Kuputika kwepfuti kunogadzirira zvikamu zvesimbi kuti zviwedzere kugadziridzwa sekupenda kana kupotera poda. Iyi nhanho inofanirwa kuve nechokwadi kuti jasi rinonamatira zvakanaka kune chikamu. Kuputika kwepfuti kunogona kuchenesa zvinosvibisa zvakaita setsvina kana mafuta, kubvisa okisidi yesimbi senge ngura kana chigayo, kana kubvisa pasi kuti iite seyakatsetseka. Kuputira hupfu, kupenda, kuputika kwejecha uye kuputika kwebeadblasting ndezvako, uye galvanization inoitwa kunze kwenzvimbo uchishandisa mabhizinesi emuno.
Kusimba Kwebasa Rinorema Kugadzirwa
EN ISO 3834-2 Chitupa
-- ISO 9001 Chitupa
- AWS Welding Inspector
-- ina welding timu
-- 2 seti yematani mashanu welding rotator
-- 1 seti yewelding yekusvuta yekuchenesa centre line
-- 1 seti yekubatanidza uye welding line ine 3 mavhavha